ZOMA 14 JONA 2019
PREFEKTIORAN’NY POLISY : Ho hentitra ny fitandroana ny filaminana rahampitso
Fitsipi-pifehezana maro no apetraky ny eo anivon’ny prefektioran’ny polisy mba hampirindra am-pilaminana ny fanatanterahana ny fandatsaham-bato rahampitso. 6 novembre 2018
Ho hentitra ny fitandroana ny filaminana ao anatin’izany, tahaka ny hatramin’izay dia tsy hitsitsy amin’ny fampiharana ny sazy ho an’izay minia mandika lalàna ny mpitandro filaminana.
Amin’ny ankapobeny dia azo lazaina fa nizotra tamin’ny an-tsakany sy an-davany ny fampielezan-kevitra nataon’ireo kandidà tao anatin’izay iray volana latsaka kely izay. Nisy ihany teny antsefatsefany teny ny indro kely, indrindra teo amin’ny fisiana hetsika noentina nanoherana ny datim-pifidianana nataona kandidà maromaro saingy tsy nanakana ny fahatontosan’ny fampielezan-kevitra hatramin’ny farany izany.
Hiditra amin’ny dingana faharoa indray amin’ny fiatrehana izay fifidianana izay ireo kandidà sy ny vahoaka Malagasy rahampitso, dingana iray anisany lehibe eo amin’ny firenena. Hifidy sy handatsa-bato ireo olom-pirenena voasoratra anaty lisi-pifidianana. « Samy nanaja ny fepetra rehetra tamin’ny fampielezan-kevitra ireo kandidà. Hiditra amin’ny dingana faharoa indray isika dia ny fandatsaham-bato izay namoriana ny lehiben’ny Distrika, ny solontenan’ny Céni ary tompon’andraikitra voalohany amin’ny filaminana eto Antananarivo. Nisy ny fivoriana sy fandaminana noentina nandraisana fanapahan-kevitra », raha fintinina ny nambaran’ny prefektioran’ny tanànan’ Antananarivo, ny kolonely Ravelonarivo Angelo. Araka izany dia nisy fepetra tapaka izay tsy maintsy horaisina hitandroana ny filaminana mandritra ny tontolo andro, hanatanterahana ny fandatsaham-bato. Anisan’izany ny fahazoan’ny mpitandro filaminana manao fanamiana sy mirongo fitaovana miditra ao anatin’ny birao fandatsaham-bato.
Tsy azo itondrana finday ao amin’ny trano fisainana
Anjaran’ny filohan’ny birao fandatsaham-bato ny mandray ny andraikitra feno amin’ny fanaraha-maso rehetra ny ao anatin’ilay birao iandraiketany, raha toa kosa misy ny filàna vonjy izay vao afaka miditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana. Hiparitaka manerana ireo birao fandatsaham-bato manerana ny Nosy ireo mpitandro filaminana. Ho an’ireo olom-pirenena hanatanteraka ny adidiny dia tsy azon’izy ireo atao ny mitondra finday ao anatin’ny trano fisainana.
Nambaran’ny prefektiora ihany koa fa tokony hohajaina ny ora fikatonan’ireo birao fandatsaham-bato mba hisorohana amin’ny mety hisian’ny korontana. Aorian’ny fikatonan’ny birao ihany koa dia hiantoka ny fitoniana ireo mpitandro filaminana. Ireo rehetra ireo no tapaka nandritra ny fivoriana niarahan’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tanjona ny hahatanterahan’ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana sy ny filaminana.
Tratran’ny mpifaninana taminy nangala-bato i Nepatraiky Rakotomamonjy KANDIDA DEPIOTE IHOSY (227) 12 juin 2019 Nodimandry teo amin’ny faha-63 taonany i Jean Robert VERY OLOMANGA ANTSIRANANA (227) 12 juin 2019 Miaramila miisa 34 naiditra am-ponja vonjimaika HETSIKA FAMPANDRIANA FAHALEMANA (198) 12 juin 2019 Saron’ny zandary tao an-tranony ireo poketran’olona voaendaka JIOLAHY RAINDAHINY TRATRA TENY ITAOSY (169) 11 juin 2019 Mandà ny endrika tsindry rehetra atao aminy ny Hcc VOKA-PIFIDIANANA OFISIALY (161) 11 juin 2019 Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora LEHILAHY TRATRA NANGARONA NY PAOSIN’ NY NAMANY (152) 13 juin 2019